January | 2013 | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
from Britain-Burma Society site Abhaya: Burma’s Fearlessness Text and photography by James Mackay with foreword by Aung San Suu Kyi. Published by River Books, Bangkok, 2011. 244 pages. ISBN 978-616733913-9. US$30. £17.50. Glossy coffee table books on Burma usually feature ethnic groups, Buddhist temples and monasteries, textiles and handicrafts, and colourful scenes of local life. […]
Filed under: book review, history, politics	| LeaveaComment
The first national university in Burma
Pre-war Mandalay Intermediate College was upgraded to Mandalay University College under University of Rangoon in 1947 under the auspice of Mr. Abdul Razak (B.A., National College) , the then minister of education in Aung San’s cabinet and, with the full support of the Upper Burmese intellectuals and people, it was developed intoaseparate university […]
မဟဝှါကို ဂျပန့်ခေတ် လွတ်လပ်ရေးရစက ဗုန်းကျင်းထဲ မွေးခဲ့သည်။ လူတွေဟာ မြေကြွက်တွေလိုပဲ ကျင်းထဲကကို မတက်ရဘူးဟု သူ့အမေကြီးမသေခင်က ပြောလေ့ရှိသည်။ ရန်ကုန် နေပြည်တော်မှာ လွတ်လပ်ရေးပွဲခံချိန်တွင် တောနယ်ကျေးလက်က လူများ ပလိပ်ပြေး ဓမြပြေး ဗုံးပြေးပြေးနေရသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးဆိုဒါ သိမှသိကြပါစ။ ခေတ်ဆိုးကြီးမှာ အစစ ရှားပါးရသည့်အထဲ ဂျပန်က ကားသိမ်း ပစ္စည်းသိမ်း သမီးဆွဲ အိမ်သိမ်းတွေရန်က လွတ်အောင်ရှောင်ရတာက ပိုခက်သေးသည်။ မဟဝှါ အဖေကြီး မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ရေဒီယိုဖွက်ထားတာကို ကလိတာ လူသိမှဖြင့် ကင်ပေတိုင်လက်မရောက်ပါလား။ ဒီကြားထဲ လေနတ်သားတဲ့ သတင်းစာတွေ လေယာဉ်ပေါ်က ကြဲတာ ခိုးဖတ်ရ၊ မဟာမိတ်ပြန်အလာ မျှော်ကြရ။ ရှိသည့် ဗမာတပ်ကလဲ ဂျပန်တပ်အောက်မှာ နေရင်း ဂျပန်ကျင့် အကုန်ယူကာ လူတွေကို အာဏာပြတတ်သေးသည်။ အဲသဟာနှင့် […]